Incwadi Yokupheka Yabanesifo sikaShukela - South Africans with Diabetes
Izindlela zokupheka ezimnandi zabanesifo sikashukela
Ndawonye nabakwa Pick n Pay, siqhamuke nohlu lwezindlela zokupheka zabantu abanesifo sikashukela abafuna amasu namaqhinga okupheka ukudla abazokudla osukwini. Lana sibala ukudla kwasekuseni, okwasemini okwantambama kanye nezibiliboco nje – sikuphethe konke kanti ke futhi okwawo wonke umuntu.
Zitholele iseluleko ngokudla okunomsoco kokwakha ukudla okunesisindo, kanti futhi okunambithekayo wonke umndeni wakho ozokuthakasela noma ngabe banaso isifo sikashukela okanye abanaso. Zitholele icwecwe lakho lamahhala ngokuthi ucofe la okubhalwe khona ukuthi (click on Download below) okanye uzifundele ekhasini lethu (online).
Ingani sishicilele incwadi yokupheka yesifo sikashukela
Ukuze uthole ukwelulekwa okungakusiza ngamacebo okuphila kahle nesifo sikashukela, vakashela leli khasi community blog. Lana ke uzothola ulwazi elisuka kumphakathi wethu wabanalesifo, ongcweti bezokudla, amasu okuzivocavoca, kanye nazo zonke izindlela zokuphila ngentokomalo kanye nokuphila ngendlela ephephile yokuphila unesifo sikashukela.
Kade sasikulangazelele ukuthi sishicelele incwadi yokudla yethu kwa Sweet Life diabetes, siyajabula ukuthi ekugcineni isikhona esikwazi ukuyabelana nawe. Ukuthi unesifo sikashukela akusho ukuthi sekumele udle ukudla okunga nambithiseki kahle. Lezindlela zokupheka ezimayelana nabanesifo sikashukela ziyanambitheka ngalendlela yokuthi wonke umndeni uzozithakasela kanti wonke umuntu uzofuna ukudla lokho kudla. Kukho konke nje, akukho ukuthi okuthiwa cha lokhu okwabantu abanesifo sikashukela kuphela – sonke kumele sidle izinhlobo zokudla ngokwehlukana kancane, noma ngabe sinawo ushukela noma asinawo.
Zibandakanye nomphakathi wethu wabanoshukela
Sicela usazise ngokuthi ucabangani ngaloluhlu lwezipheko esilufakile, kanye nokuthi imaphi amanye amasu amayelana nokudla ongathanda ukuwabona siwafake kuloluhlu ngokuzayo! Ungasithumelela imeyili okanye uzibandakanye nathi ekhasini elisenkundleni yethu yezokuxhumana u “Facebook” Diabetic South Africans.